भोलिदेखि काठमाडौं उपत्यमा २५ सिट माथिका सार्वजनिक बस मात्र चल्न पाउने , के गर्न पाईन्छ के पाईदैन ? यस्ता छन अबको नियमहरु - Mitho Khabar
भोलिदेखि काठमाडौं उपत्यमा २५ सिट माथिका सार्वजनिक बस मात्र चल्न पाउने , के गर्न पाईन्छ के पाईदैन ? यस्ता छन अबको नियमहरु
June 29, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on भोलिदेखि काठमाडौं उपत्यमा २५ सिट माथिका सार्वजनिक बस मात्र चल्न पाउने , के गर्न पाईन्छ के पाईदैन ? यस्ता छन अबको नियमहरु
मङ्गलबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र सञ्चालन हुने २५ सिट क्षमताभन्दा बढीका सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गरिने भएको छ । स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै र भौतिक दूरी कायम गरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । चालक, सहचालक तथा यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउने, सवारी साधनको ढोकामा स्यनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै सहचालकले पञ्जा लगाउनुपर्ने र अनिवार्य रुपमा सवारीसाधन निसङ्क्रमित गर्नुपर्नेछ । सवारीसाधन बिहान ६ः०० देखि साँझ ७ः०० बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइने छ । निजी सवारीसाधन (कार जीप, भ्यान) मा बढीमा चार र ट्याक्सीको हकमा बढीमा तीनजना मात्रै सवार गर्न पाउने नियम छ ।
मोटरसाइकल स्कुटरसमेत जोर बिजोर प्रणाली लागू चलाउन पाइने छ । स्वास्थ्यकर्मी, पशुस्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स, खानेपानी, विद्युत् मर्मतसम्भारका सवारी साधनले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी निर्बाध रुपमा सञ्चालन हुन पाउने बताइएको छ ।
अत्यावश्यक सेवा जस्तै एम्बुलेन्स, खानेपानी, विद्युत् मर्मतसम्भार, स्वास्थ्य सम्बद्ध (औषधि, अक्सिजन सिलिण्डर), दूरसञ्चार इन्टरनेट मर्मत, कार्गाे, कुरियर तथा डाँक सेवा र फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी ढुवानीका साधनमा ब्यानर वा प्रिन्टमा विषय उल्लेख गरी निर्बाध रुपमा सञ्चालन गर्न पाइने छ । विवाह तथा व्रतबन्धका हकमा आफ्नो घर वा बसेको स्थानमा बढीमा १५ जनासम्म स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्ने गरी उपस्थित हुन पाइने छ ।
त्यस्तै यसका लागि दुई सवारीसाधन ब्यानरसहित आवतजावत गर्न दिने बताइएको छ । सरकारी, सार्वजनिक संस्थान, कूटनीतिक नियोग, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, कृषि मल, बीउबिजन, पशु चिकित्सकलगायत अत्यावश्यक सेवा प्रदायक सवारीसाधन निर्बाध रुपमा सञ्चालन हुन पाउनेछन् ।
तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, सोको प्याकिङ सामग्री, कुखुराको चल्ला र पशुपन्छीजन्य पदार्थ, भेटेरिनरीसम्बन्धी इन्धनलगायत बस्तु बिहान ९ः०० देखि ११ः०० र अपराह्न ४ः०० देखि ७ः०० बजेसम्म ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सार्वजनिक तथा निजी निर्माणको कामका लागि निर्माण सामग्री ढुवानी बेलुका ९ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । पत्रकारलाई सूचना विभाग वा मिडिया हाउसले जारी पासका आधारमा आवतजावत गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ
‘डेल्टा प्लस भेरिएन्ट का बारेमा विज्ञहरु यसो भन्छन
प्रहरी चौकीबाट रिहाई पछी सपनाले भनिन् – ‘’मलाई पुरुष प्रहरीले छातीमा हात लगायो’’ (भिडियो सहित)
सुनका औँठी–सिक्री लाएका, आइफोन बोक्ने राहतको लाइनमा। राहत दिने कि नेदिने?
April 7, 2020 mithokhabar
महाकाली नदीले यति धेरै घर डुबानमा हेर्नुस भिडियो
June 20, 2021 Mitho Khabar
जोरपाटीमा घ’ट्यो ड’रलाग्दो घटना ! प्रेमिकाले बिहे गर्न मानिनन्, प्रेमीले गरे आ’त्मह’त्या….भिडियो सहित
January 23, 2020 mithokhabar